Instagram-ka ayaa ku qariya waxyaabaha jecel sawirada Mareykanka | Androidsis
Instagram mar hore ayay ku qarinaysaa waxyaabaha jecel waxyaabaha lagu daabaco Mareykanka
Sannadkan, sannadka dhexdiisa, waa la xayaysiiyay in Instagram waxay qarin doontaa tirada jecel ee sawirrada in lagu soo galiyay bartaada. Qiyaas ay abuurayaasha shabakada bulshada ay ku doonayaan inay diirada ku saaraan tayada waxa ku jira, marka lagu daro raadinta yareynta ku mashquulida waxyaabaha jecel iyo dareenkaas ama u baahan ogolaanshaha. Tan iyo markaas, waxay sameeyeen tijaabooyin.
Marxalad cusub oo tijaabo ah ayaa bilaabmay hadda, ee Mareykanka, sida shaaca ka qaaday. Instagram ayaa sii wadaysa xiisaha ay uqarinayso waxyaabaha ay jecel yihiin sawirrada, in kasta oo waxa loogu yeero saamileyaal ay aad uga walaacsan yihiin saameynta ay ku yeelan karto qaabkooda ganacsi.
Bilahaan, Instagram ayaa ahayd imtixaano laga qaado wadamo kala duwan iyadoo shaqadan lagu qarinayo waxyaabaha la jecel yahay. Inta badan wadamada shaqadan lagu tijaabiyay, waxaa suurtagal noqotay in la arko sida ay udhaceen tirada la jecelyahay ee daabacaadda ee shabakada bulshada. Tani waxay muujineysaa ugu yaraan dhowr daraasadood. Wax shaki kiciya.
Mid ka mid ah kooxaha in lagu muujiyey ka soo horjeedka cabirkan waa kuwo saameyn ku leh. Kooxdan dadka ah waxay ka dhigtay tirada dadka jecel iyo kuwa raacsan qaab ganacsi, wax iyada oo tallaabadan lagu cabsi gelin karo, sida ay yiraahdaan. Marka waxay isku dayaan inay ka hortagaan inay rasmi noqoto.
Ilaa hadda, Instagram ayaa tijaabisay tijaabooyinkan waddamada sida Japan, Australia ama Boqortooyada Ingiriiska. In kasta oo shabakadda bulshadu aysan wali sheegin haddii ay noqon doonto qiyaas sugan iyo in kale. Sababtaas awgeed, inbadan ayaa rajeyneysa in shabakada bulshada ay dib u laabaneyso, si tirada jecel ee dhamaan qoraalada loo ilaaliyo.
Waa inaan sugnaa si aan u aragno sida tijaabooyinkani ugu soo baxaan Mareykanka. Illaa iyo hadda Instagram-ka ayaa ku fiicnaaday cabbirkan, marka marka laga reebo isbeddelada daqiiqaddii ugu dambeysay, ay ku sii wadaan qorshayaashooda si ay uga saaraan tirada dadka jecel waxyaabaha ay ku daabacaan. Sideed u aragtaa cabbirkan shabakadda bulshada?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Instagram mar hore ayay ku qarinaysaa waxyaabaha jecel waxyaabaha lagu daabaco Mareykanka